Peru sy Silia dia nanidy sisintany ho an'ireo mpandeha vahiny
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Peru sy Silia dia nanidy sisintany ho an'ireo mpandeha vahiny
Manakatona ny sisintaniny i Chili sy Peroa hatramin'ny androany raha ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Amerika Latina LATAM dia nilaza fa mampihena ny asa hatramin'ny 70 isan-jato izany satria mikorontana ny faritra mba hanoherana ny areti-mifindra coronavirus miely haingana.
Amerika Latina dia efa nisoratra anarana tranga maherin'ny 800 sy olona fito, araka ny fanisana nataon'ny AFP, taorian'ny nahatongavan'ny Repoblika Dominikanina ho firenena farany nitatitra fatin'olona.
Tonga ny fanambarana rehefa nanambara i Chile tamin'ny Alatsinainy fa ny isan'ireo tranga voan'ny virus coronavirus dia nitombo avo roa heny hatramin'ny Alahady ka hatramin'ny 155.
Nanaraka ny raharaha i Peroa taoriana kelin'izay niaraka tamin'ny filoham-pirenena Martin Vizcarra nanambara fepetra roa tapa-bolana “androany, manomboka amin'ny misasakalina.”
Ampahany amin'ny fanjakana vonjy maika izay nambara fa tara ny alahady teo fa toa an'i Silia dia tsy ho voakasiky ny fanidiana ny sisintany ny entana.
Arzantina, Brezila, Orogoay ary Paraguay dia nanamafy ny fanidiana ny sisin-tanin'izy ireo, raha toa kosa ny governemanta tany Asuncion dia nametraka fe-potoana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.
Miato ny famokarana i Airbus